Chengetedza zvinoitika kumashure, neLingon ye macOS | Ndinobva mac
Javier Porcar | | Zvimwe Zvirongwa zveMac, dzakawanda
Imwe yezviito zvaunogara uchifarira kuziva mukombuta kana Mac anoshanda masisitimu ari zviito zvinomhanya kumashure. macOS chirongwa chakanyatsogadziriswa, uye kumisikidza sisitimu yekushandisa kana yechitatu-bato kunyorera kumashure haifanire kukanganisa kujairika mashandiro emidziyo yedu.
Chero zvazvingaitika, hazvikuvadze kuziva kunyorera senge Lingon, iyo nenzira yakajeka inotibvumira kuti titarise zvinoitika mumitsipa yetsinga yeMac yedu y ona kuti ndeapi mashandiro ari kushanda paunenge uchiita chero mhando yebasa.Mazhinji emashandisirwo aya haapedze zviwanikwa, sezvo ivo vakarara zvishoma kusvikira tavatumira rairo, kana ivo vanoongorora nguva zhinji kana paine chadzurudzo. Chero zvazvingaitika, Lingon inotiratidza mune inoonekwa chaizvo interface, ese maitiro kubva pakutanga. Chaizvoizvo, chiratidziro chemifananidzo che daemon manejimendi, iyo yatinogona kuwana zvakananga kubva kuKutsvaga.
Lingon chikumbiro chine nhoroondo yakareba. Iyo yekutanga vhezheni yakabva muna 2006. Zvisinei, iyo interface inoenderana zvizere neiyo itsva Apple mafomati. Kana iwe uri mushandisi mutsva, kuziva maitirwo anoshanda paMac kunogutsa kuziva zviri kuitika pasi ipapo.
Kune rimwe divi, kune vashandisi vehunyanzvi, Lingon inobvumira kwete chete kuti ione maitiro aripo, asiwo kuzvishandura uye kuwedzera zvitsva. Iyo ine kumberi sarudzo, iyo inogona kumhanyisa kunyorera kana script pane yakatarwa nguva.
Pane shanduro mbiri dzekushandisa. Lingon 3 tinogona kuwana pane Mac Apple Chitoro pamutengo we € 10,99. Asi anovandudza ane vhezheni kunze kweinozivikanwa Apple chitoro Chemhondoro x6, pamutengo mumwe chete. Humwe hunhu hunoshanduka, mu link, tinogona kuenzanisa izvo zviviri zvinoshandiswa kuziva kuti ndeipi inogona kutifadza zvakanyanya. Tungamira kuti iyo vhezheni ine yakasviba modhi uye yekutarisisa maonero emabasa, marekodhi echiito chega chega uye kugadzirisa kwemaitiro maitiro. Zvakare pane yewebhusaiti yemusimudziri isu tinokwanisa kuwana yekuyedza vhezheni kuti tione kana iko kunyorera kuchitigutsa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Chengetedza zvinoitika kumashure, neLingon yeMacOS